Skype on iPad | Martech Zone
Weli waan xasuustaa markii kiniiniyada loo maleynayay inay xoogaa ka baxsan yihiin heerka caadiga ah. Si kastaba ha noqotee, waxaa jira codsiyo aad u tiro badan oo beddelaya adeegsigooda adeegsigooda oo ku habboon kaniiniga dhaqankaas is beddelaya Maanta uun ayaan laptopkeyga uga tagay guriga anigoo aaday dhanka Barnes iyo Noble. Waxaan keenay iPad-kayga halkaan oo waxaan ka maray xoogaa shaqo ah.
In kasta oo aan leeyahay Thunderbolt oo shaashaddiisu aad u ballaadhan tahay, haddana iPad-kayga wali wuxuu leeyahay guryo aad u sahlan oo aan ku shaqeeyo. Keligay keli ma ihi lambarrada sanadka soo socda. Kiniinnada saddexaad ayaa la filayaa inay arkaan kobaca saddex-geesoodka ah! Iibinta laptop-ka, dhanka kale, ayaa leh Dhiciyay. Kiniiniga ayaa yimid!
Waa kuwan xayeysiinta Skype ee dhowaan loo sii daayay iPhone:
Hadda Skype wuxuu ku jiraa ipadka. Su’aasha waa in la isweydiiyo, maxay tan ku yeeli doontaa suuqa mobilada? Iibinta taleefannada casriga ahi way sii kordhayaan - iyagoo ka sii dheereeya iibka PC-ga… miyay sii socon doontaa muddo dheer? Daacadnimo dhan, haddii aan ku wici karo wicitaan tayo leh oo ku saabsan Skype-ka ipad-kayga iPad-kayga oo aan ku xidhayo isku-xidhka weyn ee wireless-ka ah (haddii ay bixiyeyaasha bilaa-waayirka ahi xiraan mooyee)… Miyaan u baahanahay taleefankayga mar dambe? Weligaa ma arki kartaa ka ganacsiga taleefankaaga gacanta gebi ahaanba?
Tags: codsiga ballantaMaareynta warbaahinta bulshada ee ballaaranGoogle AdWords ee SEOGoogle Analytics ee SEOArkiifiyada Filimka InternetkaJiraMaareeyaha iibka
Agoosto 15, 2011 saacaddu markay ahayd 11:00 PM
Qorshaha taleefanka gacanta ayaa isu rogi doona qorshaha xogta mobilada. Dhawaan ayaa ku filan dhammaan taraafikada codka waxay ku dhex mari doonaan shabakadaha xogta. Su'aasha kaliya ayaa noqon doonta nooca foomka ee aad u isticmaasho isgaarsiinta. Ma waxaan rabaa in aan qaato laptop-ka, kaniini ama pc-ga jeega?